Lamaane Shiinays ah oo 200 oo Baranbaro la galay garoon Diyaaradeed. – Shacabka News
Lamaane Shiinays ah oo 200 oo Baranbaro la galay garoon Diyaaradeed.
Arrintan la yaabka leh ee lagu arkay lamaanahan da’da ah ayaa dhacday 25 Nofeembar.
“Meesha waxaa ku jiray bac ay ka dhex dhaqdhaqaaqayeen waxyaabo badan oo madmadaw,”
Sida Kankan News ay u sheegay Xu Yuyu oo ilaalada ka mid ahayd.
“Gabadh ka mid ah shaqaalihii ayaa markaas furtay boorsada, baranbaro ayaana ka soo yaacday. In ay ooydana wax-yar baa uga dhimanaaa”
ayayna hadalkeeda ku sii dartay.
Ma uusan sii faahfaahin xaaladda xaaskiisu ku sugan tahay, laakiin Yu ayaa sheegtay in masuuliyiinta loo sheegay in ay tahay nooc dawo ah oo waayadii hore la isticmaali jiray.
Inta kareen dawo ah lagu qaso baranbarta ayaana jirka la marsadaa.
Beijing Youth Daily ayaa sheegtay in aan la ogolayn in wax nool lala galo diyaaradda gudaheeda iyadoo lagu wato boorsada gacanta, lamaanihiina ay ogolaadeen in ay kaga tagaan laamaha ammaanka, Lamana oga meesha ay baranbarahaasi ku dambeeyeen.
Ma aha markii koobaad ee laamaha ammaanku ay wax layaab leh ka dhex arkaan mashiinnada ammaanka lagu baaro.
Author Mohamed YarePosted on 01/12/2017 Categories WARARKA CALAMKA
Previous Previous post: Nin loo ganaaxay in uu waddo Rinjiyeeyay si ay Saxmaddu uga yaraato.
Next Next post: DHAGEYSO: Madaxweyne Farmaajo oo Xilka ka Qaadaya Shaqsi kalsooni ka Haysta Shacabka Somaliyeed…